Mpiari-Tory An’arivony Mitafy Halloween No Mifety Eny Amin’ny Lalamben’i Tokyo · Global Voices teny Malagasy
Mpiari-Tory An'arivony Mitafy Halloween No Mifety Eny Amin'ny Lalamben'i Tokyo
Voadika ny 03 Novambra 2016 7:29 GMT
DIKASARY: Tapaka ny làlana ho an'ny mpandeha an-tongotra nandritra ny Halloween 2016 rehefa nivoaka ny araben'ny tanàna ireo mpandray anjara tamin'ny herintaona. Teo ambanin'ny fiarovana hentitra, lasa “paradisan'ny mpandeha an-tongotra” i Shibuya hanaovana Halloween. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube ANN News .
Nakatona tamin'ny Asabotsy 29 Oktobra teo noho ny fandraisana ny Fety goavamben'ny Halloween ny distrika iray malaza indrindra fialamboly ao Tokyo. Shibuya, “tanandehibe anaty tanandehibe” ao Tokyo, no foiben'ny kolontsain'ny tanora ao Japana.
Toeram-pitsidihana malaza ho an'ny tanora ireo fivarotana lehibe maoderina antsoina hoe 109 sy ny làlana Bunka Mura Dori , ary feno toeram-pandihizana mihitsy aza i Shibuya, bar Karaoke sy toerana maro hafa fialana voly. Ary Shibuya no sehatry ny fetin'ny Halloween lehibe indrindra ao Japana isan-taona.
— ゆるふわ陸士☆埼玉 (@yuruhuwa_rikusi) October 29, 2016
[Mampiseho ireo mpandray anjara ao Shibuya mitafy tahaka ny praiminisitra Japoney Shinzo Abe sy Mickey Mouse ny sary]
Mety ho enjehina noho ny fandikan-dalànan'ny zon'ny mpamorona ry zalahy ireo.
Nidina teny Shibuya ihany ny olona an'arivony ny alin'ny Sabotsy teo na dia teo aza ireo ahiahy fa mety hanakana ny vahoaka tsy ho avy ny orana sy ny hatsiaka.
— ネコスポ（気軽にフォローどうぞ♫） (@nekospo) October 29, 2016
Halloween tao Shibuya
Ity no taona voalohany nisian'ny fanakatonana ireo làlam-pifamoivoizana fiara misy maotera ao Shibuya sy ny manodidina noho ny Halloween. Araka ireo seha-baovao tsy miankina Japana Today , hipoka olona ireo sisin-dalana hany ka tena sarotra ny fifamoivoizana teo anelanelan'ny tamin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny misasak'alina ” nandritra ireo taona teo aloha.
Happy Halloween…#halloween #ハロウィン #shibuya #渋谷ハロウィン #渋ハロ #渋谷 #渋谷スクランブル交差点 #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる #ファインダー越しの私の世界 #tokyo #japan pic.twitter.com/4Z5Lowjzn9
— onotch (@onotch_x) October 30, 2016
Arahabaina nahatratra ny Halloween …
#halloween #shibuya #shibuya Halloween #shibuya scramble #sary #tokyo #japana
Nanazava ny Sankei News;
Ny faritra nakatona [ faritra Shibuya] dia ahitana ny lalana mivalampatra 270 metatra manoloana ny Tranobe SHIBUYA 109, ny fivarotana lehibe Tokyu ary [ny lalana] Bunka Mura Dori, ny lalana iray hafa kosa dia ilay mivalampatra ao Dogenzaka avy any amin'ny Tranobe 109, ka lasa nanome endrika Y goavam-be [ny lalana notapahina]. Voasakan'ny barazy ireo arabe tao an-drenivohitra raha tokony ho feno fiara , ary vitsy ny fahitana tselatra fakan-tsary nandeha teny afovoan'ny olona nirohotra teny amin'ny lalambe.
Ankoatra ny fanakatonana ny lalana mba hifamoivoizan'ny mpandeha an-tongotra, dia voamarika tamin'ny ezaka mba hifehezana ny korontana araka izay kely indrindra sy hitandroana ny filaminana tamin'ny alalan'ny fisian'ny polisy maro be ny Halloween 2016 tao Shibuya:
かわいすぎて癒されたw#渋谷ハロウィン #渋谷 pic.twitter.com/QoKGsjV7yD
— おーぬまん（大沼 類） (@onumaaan) October 30, 2016
Halloween 2016 ao Shibuya: tahaka ny ahoana izany amin'izao ora izao (TPT)
Tena famonoana izao ho an'ny olona nirava avy niasa … tsy afa-mihetsika mihitsy.
Manao fampihetseham-batana i Pikmin [mpandray anjara amin'ny lalao Video malaza ] … Mahafinaritra be! #Shibuya Halloween
— 中山夏美 (@zao_natsumi) October 29, 2016
Halloween izao ary feno olona ao Shibuya. Ary misy polisy maro be tsy tahaka ny mahazatra!
Tao amin'ny sioka iray, nanapan-kevitra ny hifantoka tamin'ny fandraisana anjaran'ireo olona fantatra fa tsy Japoney (izany hoe, “vahiny”) tao amin'ny fankalazàna ny Halloween ihany koa ny Sankei News.
黒人男性が「フォーッ！」いきなり路上に飛び出し歓声　ハロウィーンで厳戒の渋谷、交通規制開始 https://t.co/tkCKN4NIkA #ハロウィン pic.twitter.com/Pi6CLiefOn
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 29, 2016
Nirohotra tampoka tao amin'ny làlana vao nakatona ny mainty hoditra iray izay nihiaka hoe “Whoo!”.Nakatona ho an'ny fiara noho ny fiarovana mafy hifaliana Halloween i Shibuya .
Koa satria ny fako no olana nandritra ireo taona teo aloha dia namboatra fitoera-pako manana lohahevitra Halloween ireo mpikarakara:
— かっつー (@kattsuw) October 29, 2016
Fitoera-pako tao amin'ny garan'i Shibuya .
Nitatitra ny habetsahan'ny vahoaka ny vaovao an-tsary, ary nandefa lahatsarin'ireo fitafy mianjaika.
Nitombo ny lazan'ny Halloween tany Japana tao anatin'ny taona maromaro. Tamin'ity taona 2016 ity, betsaka kokoa ny vola nolaniana tao Japana tamin'ny Halloween noho ny tamin'ny andron'ny mpifankatia.
KISARY: milaza ny vola lany tamin'ny Andron'ny Mpifankatia ny tsipika mena , ny tsipika volomparasy ny an'ny Halloween; nitovitovy ny vola niditra tamin'ny 2015 ; tamin'ny 2016, ny vola niditra tamin'ny Halloween (1.345 lavitrisa dolara) nihoatra ny vola niditra tamin'ny Andron'ny Mpifankatia (1.340 lavitrisa dolara Amerikana). Pikantsary avy amin'ny Fantsona Youtube ANN News .